मात्र एउटा गुलाबको फुलले पनि बनाउनसक्छ तपाईलाई मालामाल, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग – News Nepali Dainik
१७ वर्षीया किशोरीको बयान : फेसबुकमा कुरा भएर गेष्ट हाउस पुर्यायो, कोठामा पुग्नासाथ…
सीसीएमसीको बैठक बस्दै, पुन: लकडाउन होला ?
रोमानियाको कामदार भिसामा नेपालीहरु जान पाउने तलब कति ?
हेर्नुहोस लाइसेन्स परीक्षामा खुल्यो नयाँ रहस्य: ट्रायल फेल भएपनि १२ हजार रुपैयाँ दिए पास !
मुकुन्द घिमिरेले सुटुक्क गरे बिबाह , को हुन दुलही ? तस्बिर सहित
मात्र एउटा गुलाबको फुलले पनि बनाउनसक्छ तपाईलाई मालामाल, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २०, २०७८ समय: १५:१२:०१
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार गुलाबको फुल शुक्रको कारणले हुन्छ । यसले मानिसलाई केवल राम्रो सुगन्ध मात्रै प्रदान गर्दैन यसले कुनै चमत्कार पनि देखाउने गर्दछ।
यदि तपाई यस उपायलाई आफ्नो जीवनमा सहि तरिकाले अपनाउनुहुन्छ भने तपाईको आर्थिक स्थिती राम्रो हुनेछ र नोकरी पेशामा पनि लाभ मिल्नेछ।
आज हामी यही ज्योतिषशास्त्रद्धारा जान्ने काशीश गर्नेछौ गुलाफको यस्तो उपायको बारेमा जसको उपाय अपनाउदा तपाई मालामाल पनि बन्न सक्नुहुनेछ । आउनुहोस् यसको बारेमा विस्तार रुपमा जानौँ ।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार गुलाफको फुललाई रातो चन्दन र रोली लिएर त्यलाई रातो कपडामा बाँधनुहोस् र फेरी त्यसलाई कुनै मन्दिर या आफ्नो घरको पुजाकोठामा राख्नुहोस् ।
एक हप्ता पछि गणेशजीको पुजा गर्नुहोस् र त्यस कपडालाई घरको तिजोरी या त घरको पैसा राख्ने दराजमा राख्नुहोस् यसले तपाईको आर्थिक समस्या हटेर जानेछ तथा तपाई मालामाल हुनुहुनेछ।
गुलाफको फुलमा शुक्र देवको बास हुने गर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले शुक्रबारको दिनमा गुलाफको पुरा विधी विधान अनुसार कपुर जलाएर साँझको समयमा देवीलाई चढाउनुहोस्। यसले तपाईको जीवनमा दैविक शक्तिको असर पर्नेछ र शुक्रको प्रभाव पनि मजबुत हुनेछ।
तिहारमा भुलेर पनि कसैलाई नदिनुहोस् यस्तो उपहार, दिने लिने दुवैमा…
साथै यस उपायले अचानक धन प्राप्ति हुन्छ र तपाई मालामाल हुनुहुनेछ । यति मात्रै होइन यो उपायले घरमा कहिल्यै पनि गरीबी भित्रिदैन र परिवारका सदस्यहरुले पनि आफ्नो लक्ष्य सजिलै सँग प्राप्त गर्दछन् ।
३।यदि तपाईलाई मेहेनत गरे पनि त्यसको सफलता मिलेको छैन भने तथा तपाईको घरको आर्थिक स्थिती राम्रो छैन भने तपाई यस समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागी गुलाफको फुलको उपाय प्रयोग गर्नसक्नुहुनेछ।
तपाईले पाँचौ पूर्णिमा सम्म तीन गुलाफलाई जलमा प्रवाहित गर्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईमाथि शुकको शुभ प्रभाव पर्नेछ र तपाई सफलताको सिढिँमा चढ्दै जानुहुनेछ। साथै तपाईको आर्थिक स्थितमा पनि सुधार आउनेछ । र तपाईलाई गुलाफको फुलले मालामाल बनाउँनेछ।
कहिलेकाँही मानिसको जीवनमा शुक्रको प्रभाव अशुभ हुन जान्छ । जसको कारण मानिसको आर्थिक हालत कमजोर हुँदै जान्छ। तथा मानिस ऋण नै ऋणमा दबिन थाल्छ।
यस समस्याबाट बच्नको लागी तपाई शुक्रबारको दिनमा गुलाफको फुललाई सेतो कपडामा बाँधेर त्यसलाई पानीमा बगाइदिनुहोस्।
यसले शुक्रको अशुभ प्रभाव समाप्त हुनेछ र तपाईको आर्थिक स्थिती राम्रो हुँदै जानेछ। साथै तपाई ऋणबाट पनि मुक्ति पाउनुहुनेछ। तथा नोकरी पेशामा पनि आर्थिक लाभ हुनेछ। गुलाफको फुल यो उपाय गर्नाले तपाईलाई मालामाल बनाइदिनेछ।
Last Updated on: November 6th, 2021 at 3:12 pm
७२ पटक हेरिएको
धेरै नखानुहोस् यस्ता खाना, नत्र जवानीमा खुइल्याउँछ तालु
आजको राशीफल (२०७८ मंसिर १३ गते सोमबार)
आजको राशीफल (२०७८ मंसिर १२ गते आईतबार)